Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 3t l1312 tal
Ny Soratra Masina sy ny fomban-drazana (2Tes 3.6-8)
Talata 25 Sept.
Tsy mbola nisy ny Testamenta Vaovao fony i Jesôsy tety an-tany. Ny “Testamenta Taloha” no Baibolin’i Jesôsy. Hatramin’ny voalohany anefa, dia fahendrena ho an’ny mpanara-dia an’i Jesôsy ny nankatò ny teny nambarany (Mat. 7:24-27). Nitohy nanana ny fahefany teo amin’ny fiangonana hatrany ny tenin’i Jesôsy sy ny asany nandritra ireo taona manaraka (1 Tes. 4:15, Asa. 20:35; 1 Kôr. 11:23-26). Tamin’ny alalan’ny fitarihan’ny Fanahy Masina kosa avy eo no nanazavan’ny apôstôly araka ny tokony ho izy ireo tenin’i Jesôsy sy ny maha-zava-dehibe ny asany (Jao. 15:26, 27; 16:13-15). Ary rehefa lasa ny taranaka voalohany tamin’ireo Kristianina, dia noheverina fa mitovy lenta tanteraka amin’ireo hafatra nosoratan’ ireo mpaminanin’ny Testamenta Taloha ny hafatra nosoratan’ireo apôstôly ary azo nantsoina hoe “Soratra Masina” (2 Pet. 3:2,16).
Vakio ny 2 Tes. 3:6-8,14. Araka ny voalazan’ireo andininy ireo, inona ihany koa no tian’i Paoly hampidirina ao anatin’ny foto-keviny mikasika ny fahamarinana?
Tamin’ny fotoana nahatongavan’i Paoly tao Tesalônika, dia noheverin’ny fiangonana voalohany ho nanana ny fahefana fara-tampony ny tenin’i Jesôsy sy ny fampianaran’ny apôstôly. Tsy voatery ho teny tsy mendrika tsy akory ny hoe “fomban-drazana” ao amin’ny Testamenta Vaovao; mety manondro ny fahatsiarovan’ny fiangonana ireo teny sy asan’i Jesôsy izany ary koa ireo fampianarana am-bava sy an-tsoratra nataon’ny apôstôly. Tahaka ny lanjan’ny Soratra Masina amintsika ihany ny lanjan’ny fombandrazana tamin’izy ireo. Natao ho didy izany ary tsy maintsy nankatoavina.
Ho an’ny Tesalônianina, ny fomban-drazana dia tsy ny taratasin’i Paoly ihany fa mihoatra noho izany. Tafiditra ao anatin’izany izay nolazain’i Paoly tamin’izy ireo fony izy tany Tesalônika, ary anisan’izany koa ny asany izay nasaina nalain’izy ireo tahaka. Ny niasan’i Paoly mafy mba hamelomany ny tenany tao Tesalônika, dia tsy nampiseho fotsiny hoe niahy azy ireo izy (1 Tes. 2:9); fa “fomban-drazana” izany, izay nantenainy fa hampiharin’izy ireo eo amin’ny fiainany.
Tsy mba nidonana-poana i Paoly fony izy teo amin’izy ireo. Tsy mba nihinana fotsiny ny hanin’ny hafa tsy nandoa vola izy. Niasa mafy “andro aman’alina” izy mba tsy ho enta-mavesatra ho an’ny hafa. Ary izay rehetra tsy nanao toy izany tao Tesalônika dia “tsy mpanara-dalàna”. Ny olona tsy mpanara-dalàna, araka ny famaritan’i Paoly azy, dia tsy ireo mpanakorontana ao am-piangonana sy eo anivon’ny fiaraha-monina ihany. Somary nitariny kely izany ka nampidiriny ao koa ireo izay tsy nanaraka ny fampianarana sy ny fomba fanaon’ny apôstôly.
Manambara ireo andininy ireo fa zava-dehibe ho an’ny Tesalônianina tokoa ny asan’i Paoly. Na dia nandray mivantana ny fahamarinana avy tamin’ny Tompo aza izy (Gal. 1:1), dia naneho izany teo amin’ny fiainany sy ny asa nataony fa tsy tamin’ny teny fotsiny ihany. Moa ve ny fiainantsika maneho taratra ny fahamarinana nomena antsika?